Fanahiana korontana na krizy : manome toky ny fangaraharan’ny fifidianana ny Ceni | NewsMada
Fanahiana korontana na krizy : manome toky ny fangaraharan’ny fifidianana ny Ceni
Par Taratra sur 03/04/2018
“Manome toky izahay fa tsy misy ny fitsabahan’ny fitondram-panjakana. Na fanomezana baiko ny Ceni, na ny Ceni haka toromarika amin’ny fitondram-panjakana. Toy izany koa amin’ny eo anivon’ny fiombonambe iraisam-pirenena.” Izay ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, momba ny fanatanterahana ny fifidianana.
Mahaleo tena ary miasa amin’ny alalan’ny feon’ny fieritreretany ao anatin’ny fifandaminana hentitra ny Ceni momba ny fifidianana. Izay no anasany ny mpanao politika sy ny tomponandraikitra rehetra voakasiky ny fifidianana hiara-miasa tanteraka amin’ny Ceni. Mba hisian’izay fangaraharana izay. Rehefa mangarahara ny fomba fiasa, hitan’ny olona eo avokoa ny fandehan’ny fifidianana.
Tsy hisy hiafina ny voka-pifidianana, fa havoakan’ny Ceni isaky ny birao fandatsaham-bato. Tsy atao mitamba-be isaky ny distrika izany, ka tsy fantatra ny fandehany. Raha misy ny fisalasalana, ho azo ekena ny fanaovana fampitahana ny fitanana an-tsoratra.
Mbola miandry ny fahalanian’ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana ny Ceni, vao hamoaka volavolana tetiandrom-pifidianana.
Ny tena safidim-bahoaka no hivoaka amin’ny fifidianana
“Ny antoka omen’ny Ceni, hoe tena fifidianana madio ary tena safidin’ny vahoaka no hivoaka eo: voalohany, ny fangaraharan’io fifidianana io”, hoy izy. Manomboka amin’ny fanamboarana ny lisi-pifidianana izany, amin’ny fametrahana ny firotsahan-kofidina, amin’ny fampielezan-kevitra, amin’ny fikarakarana ny voka-pifidianana, hatramin’ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy: “Hasehonay ary hataonay ampahibemaso avokoa ireo asa rehetra”, hoy ihany izy.
Ny mety hampalahelo fotsiny, angamba: ny mpanao politika sy ny vahoaka no mety ho osaosa amin’ny fiaraha-miasa amin’ny Ceni. Antsoiny ny rehetra ho avy amin’ny fiaraha-miasa, hijery ny fangaraharan’ny fizotram-pifidianana amin’ny voalohany ka hatramin’ny farany.
Raha misy ny tsy fanarahan-dalàna: ny mety ho fampiasana fitaovam-panjakana, na mpiasam-panjakana na volam-panjakana, raha misy ny mety ho fanaovana hosoka, na fanelingelenana izany fifidianana izany fa tsy araka ny safidim-bahoaka: handray andraikitra amin’ny fahefana eo an-tanany ny Ceni, hanenjika sy hametraka fitoriana amin’izany.
Hipetra-potsiny amin’izao ve ny mpanao hosoka sy mpangala-bato?